NetBase: Barmaamijka Sirdoonka Bulsheed ee Ganacsiga | Martech Zone
NetBase: Barmaamijka Sirdoonka Bulshada ee Ganacsiga
Axad, Juun 22, 2012 Arbacada, Agoosto 6, 2014 Douglas Karr
NetBase, oo hore loo oran jiray 'Accelovation', ayaa ah barmaamij sirdoon bulsheed oo u oggolaanaya cilmi baarayaasha suuqyada inay cabiraan kaqeybgalka warbaahinta bulshada.
Nidaamka Kormeerka ee Saldhigga Net wuxuu ku xoojiyaa suuqleyda kormeerka iyo qalabka cabbiraadda waqtiga-dhabta ah ee bixiya aragti deg-deg ah iyo is-dhexgal ku saabsan waxa kiciya fikradaha iyo dabeecadaha macaamiisha. NetBase Insight Workbench wuxuu siiyaa cilmi baarayaasha suuqa tiro Analytics, jaantusyada iyo qalabka baaritaanka.
Halkan waxaa ah tusaale ka mid ah 'Netbase's BrandPassion Index', oo loo isticmaalay in lagu go'aamiyo falanqaynta tartan ee astaan ​​(oo tusaale weyn u ah dukaamaysiga fasaxa ee dukaamada waaweyn):
CustomerBase, aaladda dhamaadka dhamaadka ee ay ku shaqeyneyso Nidaamka Sirdoonka Bulshadu, waxay ku dhex socotaa shabaqa, waxay muujineysaa 12-kii bilood ee hore ee waxqabadka internetka, waxayna xoojineysaa fikradaha mowduucyada, fikradaha, iyo aragtida calaamadaha, iyagoo siinaya aragtiyo waxqabad leh.
Kala duwanaanshaha furaha aaladaha kale ee la midka ah waa ka shaqeynta luuqada Dabiiciga ah. CustomerBase waa lagu daraa ereyada joojinta sida maxaa yeelay,, by, waayo, or ka dib in Google iyo matoorada kale ee raadinta dhaqameed ay iska indhatiraan. Ka mid noqoshada noocan ahi waxay u oggolaaneysaa qeexidda macnaha guud iyo sidoo kale dareenka dhabta ah, u oggolaanaya aragti wanaagsan. Kiis qodob ah: Google ayaa calaamadeyn lahaa gubi leh macno xun, laakiin CustomerBase ayaa tixgelin doonta gubi iftiin wanaagsan marka weedha loo adeegsanayo macnaha dawo-dhaqashada.
USP-da labaad ee weyni waa xog aad u tiro badan. 12 bilood ee waxqabadku waxay u dhigantaa labaatan bilyan oo baayt dhawaaq ah oo ka socda in ka badan toddobo bilyan oo dukumiintiyo dhijitaal ah Shirkaddu waxay sheeganeysaa inay jumladaha 50,000ka daqiiqo ka soo saareyso ilo ay ka mid yihiin Facebook-ga dadweynaha, baloogyada, goleyaasha, Twitter iyo goobaha dib u eegista macaamiisha.
Suuqgeyaashu waxay u isticmaali karaan NetBase inay yihiin aalad cilmi baaris suuqa ah, si loola socdo warbaahinta bulshada, ama looga faa'iideysto soo-celinta maalgashiga bulshada. Ka soo qaad boggooda:
Samee sixitaan koorsooyin dhaqso leh taas kordhinta guusha ololaha iyo dakhliga ka soo baxa. Marka codka bulshada uu kuu sheego isla markiiba meesha ololayaashaadu ay ku guuleysanayaan iyo sababta ay u halgamayaan, waxaad ku dhaqaaqi kartaa inaad horumariso soo noqoshada kharashka suuqgeynta.
Kordhi ololaha uu gaarayo aqoonsashada saamaynta iyo rajada muhiimka ah. Waad ogtahay inay jiraan "VIP-yada bulshada" halkaas - dadka codkooda la maqlo markay u sheegaan kumanaan taageerayaal ah noocaaga iyo kuwa kula tartamaya. Ogow dhab ahaan cidda ay yihiin oo sii sababo badan oo ay ku lug yeeshaan. Wax dheeri ah baro.
Samee soosaarida badeecada cusub mid guuleysata adoo si firfircoon ula socda soo dhaweynta macaamiisha alaabta cusub markay suuqa soo gasho iyo iyadoo si deg deg ah, jawaabo isku dubaridan looga bixinayo arrimaha iyo cabashooyinka soo bixi kara. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xalkeenna raad-soo-saarka bilowga ah ee cusub.
Si joogto ah ula soco caafimaadka sumadda. Samee go'aanno sumcad wanaagsan oo dardar-geliya jawaabaha hanjabaadaha calaamadda oo leh tiro dhammaystiran oo KPI ah si loo cabbiro loona maareeyo caafimaadka sumcadda bulshada waqtiga dhabta ah. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xallinta falanqaynta nooca. Si aad u aragto sida caafimaadka sumcadda bulshadu u khuseyso dhibaatooyinka ganacsiga ee dunida dhabta ah, ka akhriso falanqaynta Starbucks bartayada.
Saadaali falalka tartame oo si dhakhso leh uga jawaab hanjabaadaha tartanka oo leh falanqeyn deg deg ah, waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan noocyada tartamaya. Inbadan wax ka baro oo arag Tilmaamaha Nooca Xaraashka ah ee ficil ahaan loogu jiro barta 'NetBase'.
Fahmaan jawaabta qotada dheer ee bulshada ee ololayaasha, si loo gaaro go'aanno xog ogaal ah. Eeg balooggeena si aad wax badan uga ogaato sida Wall Street Journal uu ugu isticmaalo NetBase warbixinteeda raadraaca dareenka toddobaadlaha ah.
Inbadan ku samee miisaaniyaddaada iyo ilahaaga jira. Xalalka NetBase waxay si otomaatig ah u caadiyeeyaan una qaabeeyaan faallooyinka warbaahinta bulshada qaybaha faa'iidooyinka leh iyo cabbiraadaha. Intii aad gacanta ku kala saari lahayd kumanaan faallooyin ah, ilahaaga ayaa loo heli karaa inay ka shaqeeyaan hagaajinta ololayaasha.
Hubso inaad soo qabatid saaxiibkeen, Jason Falls, yaa ku sameynaya Webka 'Smarts Webinar' ee 'Netbase' Ogosto 15, 2012: Habka KISS ee Guusha Suuq-geynta Dijital ah.
Tags: ganacsiga sirdoonka bulshadabarnaamijka sirdoonka bulshadasaldhiggakormeerka waqtiga dhabta ahmaaraynta sumcadfalanqaynta bulshadasirdoonka bulshadacabirka bulshadahawlgelinta warbaahinta bulshada
Jul 23, 2012 markay ahayd 1:22 AM
Markaad Iibsato Taageerayaasha Facebook tirada soo booqdayaasha ee boggaaga sida ugu habboon ee bartaadu u kordho, taas oo kuu oggolaaneysa inaad si weyn uga faa'iideysato isku xirka bulshada ee bulshada si loo kordhiyo dakhliga. Tiro sii kordheysa oo shakhsiyaad ah ayaa hadda adeegsada baraha bulshada ee bulshada iyagoo iibsanaya si ay ula xiriiraan asxaabtooda iyo qoyskooda. Iyada oo ay jiraan macaamiil aad u tiro badan oo furaya shabakadda maalin kasta waxaad leedahay fursad aan xad lahayn oo aad ugu bandhigto shirkaddaada, adeegyada iyo alaabada aad u hayso macaamiisha mustaqbalka adduunka oo dhan.